आज बढ्यो डलरको भाउसँगै यी बिदेशी मुद्राको भाउ हेर्नुस कुन देशको कति पुग्यो ? – Ap Nepal
नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर भन्ने बुझन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
विनिमय दर भन्नाले एउटा मुद्राको अर्को मुद्रामा गर्दा प्रयोग हुने दरलाई बुझाउँदछ । दुई मुद्रा विचको यस्तो दर हो जस अनुसार एक मुद्रा अर्कोमा साट्ने गरिन्छ अर्थात एउटा मुद्रालाई अर्को मुद्रामा साट्नको लागी प्रयोग गरिने दरलाई विनिमय दर भनिन्छ ।
Prevटिक-टकमा भा, इरल भएका यी दुईजना सौता सौता श्रीमान सहित एकसाथ मि, डियामा-हेर्नुहोस् (भिडियो )
Nextघट्यो PCR परीक्षण शुल्क , यस्तो छ अब नयाँ शुल्क हेर्नुहोस्
गायिका बिष्णु माझीलाई गीत गाउन ५ लाख दिन तयार छु भन्दै यसरी हात जोडे (भिडियो)
आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ बिनिमय दर ..
“कोठामा चामल-पैसा केही छैन के गर्ने” डीग्री गरेका यी युवा खाना खाने लाइनमा (भिडियो सहित)